Nei Dubai Yakakurumbira Nevashanyi veSouth East Asia? | Mabasa - Basa - Kufamba DCC
* Zvizivise Iwe kune Executive Executive Vanyoreri
Zvizivise Iwe Nezve Nenzira Yakakodzera!*
Sei IkuDhavanha Yakakurumbira neVaSouth East Asia Vashanyi?
Zvinhu zvaunofanira kuziva nezvekushanda muDhaibha
Zvinotendwa kuti vanenge 16 mamiriyoni evanhu uya kuzoshanyira Dubai imwe neimwe gore rimwechete - uye nenhamba iri kuwedzera yekuuya kuSouth East Asia nyika dzakadai saSingapore neThailand, zvakakodzera kubvunzisisa kuti nei ichi chiri ichocho. Kubvira pamitengo yekutengesa kusvika kumakiromita ayo akakwana kubva kumaodzanyemba kweSouth East Asia kumagumo emhepo, pane zvikonzero zvakawanda nei Dubai inzvimbo huru.
South Southeast East iri musha kune dzimwe nyika dzakawanda dzakasimudzira dzipfumi, dzakadai seVietnam neThailand. Uye semugumisiro weizvi, kune huwandu hwepamusoro hwekodzero dzevanhu uye nevamwe vanhu vane kushandisa simba, uye ivo vose vari kuvhima kune imwe nzvimbo kuisa mari. Dubai, ne nzvimbo dzayo dzakawanda dzekutengesa, inopa mukana wakazonaka wekuita mune zvimwe zvinhu zvepamusoro. Nemapazi ezvitoro zvakakwirira-kumadokero zvakadai seHamley's toy shop neDhipomingdale dhipatimendi redu rinowanikwa paDaily Mall yakakurumbira, kune zvizhinji zvekuda kune avo vanoda kupedza.
Kuenda muzororo nguva dzose kunonakidza, asi pane zvimwe zvikomborero uye kukanganisa kunoenderana nega yega yekuita mazororo. Kubhururuka kune imwe nzvimbo pedyo nekugona kupera pajet yakare uye nguva inopera kufamba, asi inogonawo kuderedza mukana wekusarudza uripo. Chikamu chechikonzero nei Dubai ichizivikanwa neSouth East Asia vanofambira ndeyokuti inzvimbo yakanakisisa yakakwana pakati pekugara kwenguva refu uye nekukurumidza. Nzira yakananga kubva kuBangkok kuenda kuDhamasiko inotora maawa matanhatu chete, asi Ho Chi Minh City ku Dubai inopfuura vanomwe.
Kune dzakawanda dzakasiyana-siyana dzemakambani anopa mabasa pamigwagwa pakati peSouth East Asia metropolises neDhair. Emirates, iyo ndiyo yendege yenyika ye Dubai uye nedzimwe nzvimbo dzeUnited Emirates, dzinotungamirira vazhinji vavo - asi Cathay Pacific, China Southern uye nevamwe inowanikawo kusarudza kubva. Uye kunyange zvazvo ndege dzakawanda dzichienderera mberi panguva uye sezvakarongwa, zvakakosha kuti uwane inshuwarisi yekufambira zvizvidzivirire pane zviitiko zvisingatarisirwi paunofamba, kufanana nekurasikirwa kana kutakura matambudziko.
Uye ndizvo zvakarewo kuti kune dzimwe tsika dzakasiyana pakati peSouth East Asia uye Dubai, zvakare. Zvimwe zvinovaraidza maitiro, zvakadai sokunwa doro, hazvizivikanwi zvikuru muSouth East Asia: Somuenzaniso, Indonesian, ine sangano rinodzora doro rinokonzerwa nehuwandu hwevanhu vemuMuslim. Mhando iyi yemafambiro inowira zvakanaka chaizvo muDhaibhi, sezvo zvichipesana nemutemo wekunwa doro munzvimbo dzakawanda dzenyika.
Dubai inobata vimbiso yakawanda kune ani zvake anoda kuishanyira, uye zvinhu zvose kubva pakutenga kusvika kune tsika zvinopiwa pano. Izvozvo zvinotsanangura kuti nei kune vanhu vanomhanya vachienda kushanyira simba reMiddle East gore roga rega, uye nei zvichiita kuti rirambe rakakurumbira mumakore anotevera.
Dubai City Company ikozvino inopa mazano akanaka eMabasa mu Dubai. Dare redu rakasarudza kuwedzera ruzivo rwemutauro mumwe nomumwe wedu Jobs in Dubai Guides. Saka, mune izvi mupfungwa, iwe zvino unogona kuwana mazano, mazano uye basa muUnited Emirates nemutauro wako.
Kune Indonesian Expats
Wana basa sekutsvaga kubva kuThailand
Mabasa muDhailand yevaPoland vakakurudzira
Portugal Portugal Vatungamiri Vanotungamirira muDhaibha
Nokuti Bangladesh inotsanangura
Mabasa mu Dubai nokuda kwevahedheni vechiGreek
KuFilipino expats muDhailand
Mutauro weFrench Mutauro wokutsvaga
Kune vashandi vokuCroatia vachitaura muDhaibha
Mabasa muDhaibhi kuRussia muDhailand
Tsvaka basa muDhailand kubva kuSpain
Dzvanya apa kutumira CV Yemahara! 📁
WhatsApp Kushambadzira Musoro:*